Eebbe ee xadidan ee aan xad lahayn, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Sidee qof u noolaan karaa nolosha Masiixi adduunkan? Waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo jiito qayb ka mid ah salaadda in mid ka mid ah wasiirrada ugu weyn ee Ilaah, Rasuul Bawlos, uu ku tukado kaniisad yar oo ku taal meel la yiraahdo Efesos.
Efesos waxay ahayd magaalo weyn oo barwaaqo ah Aasiyada Yar-yar waxayna xarun u ahayd ilaaha Diana iyo cibaadadeeda. Sidaas darteed, Efesos waxay ahayd meel aad u adag oo raacsan Ciise. Salaaddiisa qurxoon ee kor u qaadista ee kaniisaddan yar, oo ay hareereeyaan cibaadada jaahilka, waxaa lagu qoray Efesos. Baryootankaygu waa inuu Masiixu idinku dhex jiro rumaysad. Waa inaad jacaylkiisa ku xidideysaa; waa inaad kudhisaa iyaga. Sababtoo ah sidan oo keliya ayaad ku arki kartaa heerka jacaylkiisu ka dhexeeyo dhammaan Masiixiyiinta kale. Haa, waxaan kuu baryayaa inaad fahanto jaceylkaan qoto dheer oo qoto dheer, oo aan waligeen maskaxda ku qaban karin. Markaasaad sidoo kale ku badnaan doontaa oo aad ka buuxsami doontaa dhammaan hodantinimada nolosha ee Ilaah laga heli karo » (Efesos 3,17: 19 Hope for All).
Aynu tixgelinno cabbirka jacaylka Ilaah ee cutubyo cabirro kaladuwan: Marka hore, dhererka jacaylkiisu diyaar u yahay - waa xad la'aan! Sidaa darteed isagu weligiis wuu ku badbaadin karaa isaga (Ciise) inuu Ilaah u yimaado; maxaa yeelay weligiis wuu nool yahay oo wuu weyddiistaa iyada » (Cibraaniyada 7,25).
Marka xigta, ballaadhka jacaylka Eebbe ayaa la muujiyaa: «Isaga qudhiisuna (Ciise) waa kafaaraggudka dembiyadeenna, oo keliya ma ahan oo weliba weliba weliba kuwa dunida oo dhan » (1 Yooxanaa 2,2).
Moolka qoto dheer: "Waad garanaysaa nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix; in kastoo uu taajir yahay, aawadiinuu miskiin u noqday, inaad miskiinnimadiisa hodan ku noqotaan" (2 Korintos 8,9).
Maxay noqon kartaa dhererka jacaylkani? Laakiin Ilaaha naxariista hodanka ka ahu badan yahay, oo jacaylkiisa weyn ee uu ina jecel yahay, sidoo kale wuxuu inagu dhex nooleeyey Masiixa, oo dembiyadeenna ku dhintay, oo waxaad ku badbaadi doontaan nimco. Isagu waa ina sara kiciyey, oo wuxuu inagaga xoogay jannada xagga Ciise Masiix. (Efesos 2,4: 6).
Tani waa deeqsinimada cajiibka ah ee jacaylka Ilaah ee qof walba waxaana ka buuxsamay awoodda jacaylkaas ee ku nool gees kasta oo nolosheena ah oo aan dhammaanteen u daadin karno xadkeenna: "Laakiin intaas oo dhan waxaan ku guuleysanay kii hore kan ina jeclaaday" (Rooma 8,37).
Aad ayaad u jeceshahay inaad ogaato tallaabada aad awood ugu yeelan doonto inaad raacdo Ciise!